Frank Lampard oo Tababare Antonio Conte u sheegay shaxda ay tahay inuu habeen dambe ku wajaho Barcelona - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Frank Lampard oo Tababare Antonio Conte u sheegay shaxda ay tahay inuu habeen dambe ku wajaho Barcelona
Halyeyga kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa u sheegay macallinka naadiga ee Antonio Conte Shaxda ay tahay inuu habeen dambe kala hortago Barcelona oo ay booqanayaan kulan ka tirsan Champions League.
Frank Lampard ayaa u sheegay tababare Antonio Conte inuu iska daayo sagaal beenaadka uu ciyaarayey kulamadii ugu dambeeyey, waxaana uu ku taliyey in Alvaro Morata lagu soo bilaabo Safka hore ee Chelsea kulanka Barcelona.
Tababaraha reer Talyaani ayaan ciyaarin sagaal toos ah kulankii lugta hore ee ka dhacday garoonka Stamford Bridge sidaas oo kalena Eden Hazard ayaa hoggaaminayay weerarka Blues kulankii ay guuldarrada kala kulmeen Manchester United.
Laakiin xiddiga reer Belgium ayaa ku guuldarreystay inuu gool dhaliyo habeenkaas ayaa Lampard waxa uu rumeysan yahay haddii Blues ay doonayso inay goolal ku dhaliso garoonka Camp Nou habeen dambe ay garoonka ku soo bilowdo Alvaro Morata.
Qoraal uu ku daabacay Evening Standard ayuu Lampard ku sharraxay qaabka ay tahay in Blues ku wajahdo Barca, waxaana uu xusay in haddii Chelsea ay guul rabto inay iska deyso sagaal beenaad.
Isagoo Lampard intaa ku daray in kulanka habeen dambe ay tahay in Conte uu ku soo bilaabo safkiisa hore Morata oo ciyaaraya sagaal toos ah, isla markaana ay ka dambeeyaan Eden Hazard iyo Willian, taasoo sahali karta sida uu qabo xiddigii hore ee Chelsea inay Camp Nou ku garaacaan Barcelona.